Wax soo saarka baradhada ee gobolka Arkhangelsk wuxuu kori doonaa ku dhowaad 20% shan sano gudahood - Nidaamka Baradhada
Mas'uuliyiinta gobolka Arkhangelsk waxay rajeynayaan inay kordhiyaan wax soo saarka baradhada ilaa 20% marka la gaaro 2025. Tan waxaa lagu soo warramey maalintii Khamiista TASS adeegga saxaafadda ee maamulka gobolka.
"Dhamaadka sanadka 2019, soo goynta baradhada waxay gaaraysay 17,7 kun tan, marka la gaaro sanadka 2025 wax soo saarkiisa waa inuu kordhaa ilaa 22 kun oo tan," ayay tiri adeega saxaafada.
Gobolku wuxuu sameeyay fikrad ku saabsan horumarinta baradhada iyo khudradda kobcinaysa muddo illaa 2025. Kordhinta wax soo saarka baradho ee ururada beeraha ayaa suurtagal ah labadaba sababtoo ah kororka aagga la beeray, iyo sababtoo ah kororka dhalidda: soo bandhigista qiyaasta isku dheellitirka ee bacrimiyeyaasha, daaweynta dalagyada cudurada, cayayaanka iyo haramaha, iyo sidoo kale isticmaalka baradhada abuur tayo sare leh.
Qiyaasta saadaasha ee qoondaynta miisaaniyada iyo miisaaniyada miisaaniyada dheeriga ah ee hirgelinta fikradda ayaa noqon doonta 20 milyan oo rubles.
Fikradda ayaa la soo saaray iyagoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee gobolka Arkhangelsk, Alexander Tsybulsky, kaasoo tilmaamay baahida loo qabo shirkadaha ganacsiga beeraha inay kordhiyaan wax soo saarka beeraha ee gobolka.
Source: Xigasho: https://tass.ru/ekonomika/8473279
Tags: Gobolka Arkhangelskbaradhada
Beeridda dhibaatooyin dheeri ah
Rosselkhoznadzor wuxuu dib ugu yeeray cudurka baradhada